Pool Billiards, Which word do you use?│Sports News Headlines Global Articles WebSite.WS | Gvmg - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
I ran into an acquaintance who asked what do you do with your free time? My response is that I play inafew pool leagues. My acquaintance Say’s What? I say you know, shoot Pool Billiards. Sometimes people immediately think about swimming, gambling oracar pool when they hear the word pool. In order to save time and confusion, my normal response would be I play pool inaleague, do you play pocket billiards? The two words don’t look or sound natural together like that. They do however kind of go hand in hand. While doing some key word research, I found out that the phrase pool billiards, typed just like that was searched 20,144 times last month. This sounds likeapretty large number and it is quiteafew searches. This isasmall number however compared to the monthly searches performed last month on the keyword billiards, which was 416,838. Wow that is pushingahalf million searches for the single word billiards. Billiards Parlor came in second with 95,546 searches for the month. If we put those top3together we are well over halfamillion monthly searches and that is only on those3keyword phrases. We played inachampionship match the other night in one of the APA teams that I play on and one of my team mates said that playing pool is on the decline. I am not sure if it is onadecline or not. There are however quiteafew people searching for pool and billiards related material, information or products. I wrote this article because I see these two words together all the time. They don’t sound natural but they kind of go together inafunny way. If you hear someone say, I am going to play pool, you know pocket billiards. (sounds acceptable) Guy Say’s I’m going to play pool billiards. (doesn’t sound natural) I guess since over 20 thousand people type these words into search engines inamonth, that they must bealegitimate search phrase. (Marketers would call thisashort tail keyword phrase.) Well now that I got this off of my chest, I guess it’s time to shoot some pool. သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုထွက်ပြေးရန်. Ted Pool Billiards, Which word do you use?
Posted Articles Title : Pool Billiards, Which word do you use?
■Link To This Post (HTML code) : Pool Billiards, Which word do you use?
■Trackback URL : Pool Billiards, Which word do you use?
Face Value မှာ Phillies လက်မှတ်
Broncos မှာအားသွင်း: တိုင်းအာဏာအတွက် Fight
Deer Hunting အတွက်အကောင်းဆုံး GPS
Humminbird Fishfinder 525: အိမ်တိုင်းငါးအိမ်သို့ယူလာပါ
Can you imagine what the people that came up with golf at St. Andrews would think of about it now ? Some might get down right sick to their stomachs, others would be insanely jealous. The jealous one’s want all of our high tech clubs and golf balls and the one’s that are sick of us, would hate the fact that we changed the game for ever. But with changed equipment has come changed golf courses that are much harder than the original St. Andrews Golf Course. The original golfers had no quality equipment of any kind they didn’t even haveagolf ball yet. Their clubs were nothing but wood, basicallyastick with flat end on it. The balls they used could barely even be calledaball, no where near round or perfect like we have today. To think we complain every time we scratchaball by hittingacart path or something, and they played very well with what they had. In the last 20 years golf has changed dramatically, from the equipment, to the players and fans. The clubs have addedatremendous amount of distance toaplayer’s game and today’s golf balls are scientifically engineered to help with spin, bounce, and distance as well. The overall sport has taken off all over the world, kids are playing in high schools, and colleges, and ticket sales for PGA events are often sold out. Most course you visit are full and it’s getting harder to getatee time places. Not only has the equipment to play the game advanced, but practice equipment and training aids have improved too. Every part of the game has it’s own focus, from your grip and stance to your swing. All these advantages we have now are the things that history’s golfers would love and hate. By improving the equipment, have we made the game easier ? ‘NO Bobby Jones said it best; ‘Golf is played in the five inches in between you ears.’ So golf will never get easier, it will always be our head games that make it so hard. There are books, audio books, and all types of other training aids to try and help your ‘mental golf game’. Some of these things will work for some, but others will need to just keep practicing until their confidence comes around and your thinking less and just swinging more. Golf isagame to bring families and friends together, offeringaday outing to bond and learn about each other. Being out in nature playingaround of golf with the people you love hasn’t changed since the first rounds at St. Andrews က. For more information on golf see here: http://www.tydaniels.com/ Golf has comealong way
အဆိုပါ Range တွင်နေအိမ်
ဂေါက်သီးသည်အဝေးမှသဲသဲမဲမဲလှုပ်ရှားမှုဟုထင်ရဖွယ်ရှိပြီးယင်း၏ရုပ်မြင်သံကြားအားကစားသမားများသည်သင်ကြားနိုင်ဖွယ်ရှိသောအခြားအားကစားသမားများထက် ပို၍ နည်းပါးနေသည် — ဒါပေမယ့်အစဉ်အဆက်ဂေါက်သီးကစားသူမည်သူမဆို, ဂိမ်းနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအနုပညာဖြစ်ပါတယ်သိတယ်. အချို့သောလူများအနေဖြင့်၎င်းနှင့်အကျွမ်းတ ၀ င်ရှိခြင်းနှင့်အားကစားကိုယ်နှိုက်ကိုပျော်မွေ့ရန်အချိန်ပိုယူရပေမည်. ပထမဆုံးဂေါက်သီးပုံစံကိုတကယ်ခေါ်ခဲ့သည် “ကလို” ပြီးတော့စကော့တလန်နဲ့ဗြိတိန်ကျွန်းမှာကစားခဲ့တယ်. ၎င်းသည် ၁၄၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်ပိုင်းတွင်တားမြစ်ချက်တစ်ခုမှလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်တော်ဝင်များကြားတွင်လူကြိုက်များသောအားကစားတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်. ထိုသို့နေဆဲလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းသာအထက်တန်းလွှာများအတွက်အပန်းဖြေစဉ်းစားပါတယ်. သို့သော်ဂေါက်သီး၏အထူးဆွဲဆောင်မှုကိုငြင်းဆိုရန်လမ်းမရှိသော, ၎င်းသည်အားကစားအများစုနှင့်မတူဘဲအလွန်စည်းကမ်းတကျလိုအပ်သောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်တစ်ခုလုံးကိုတစ်သက်တာကစားနိုင်ပါတယ်. သင်၌အတွင်းစိတ်ကစားသမားတစ် ဦး ရှိကြောင်းသင်မယုံကြည်နိုင်ပါ, ဒါပေမယ့်ဘာလို့အဲဒါကိုမစမ်းကြတာလဲ? ဂိမ်း၏စည်းမျဉ်းများသည်ရိုးရှင်းပြီးလိုက်နာရန်လွယ်ကူသည်, သငျသညျအချိန်အတွက်သင်ယူပါလိမ့်မယ်အရာ၏အသေးစိတ်ကို. သင်သိသည့်အတိုင်း, သငျသညျရည်မှန်းချက်အပေါက်တွေတစည်းသို့သင့်ရဲ့ဂေါက်သီးဘောလုံးကိုထိမှန်ဖို့အခြေခံအားဖြင့်ပါပဲ! ဂေါက်သီးသုံးသည့်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ခြင်းသည်ဘတ်စကတ်ဘောဝယ်ခြင်းထက် ပို၍ ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်အချိန်ကုန်၊ ငွေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကကျိုးနပ်လိမ့်မယ်. သင်၏အသက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုလိမ့်မည်, ကျားမ, နှင့်မသန်မစွမ်း (သောသင်၏ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကိုညွှန်ပြ), သင်၏ပထမဆုံးဂေါက်သီးအစုကိုဝယ်ယူသောအခါ! သငျသညျလာမည့်ကျားဝုဒ်ဖြစ်ရန်မလိုပါ — ဤသင်တန်းကိုသင်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပါ၊ ဤပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောအားကစား၌သင်ပိုမိုကောင်းမွန်လာရန်သေချာသည်. သငျသညျပင်အတော်လေးသင်အကွာအဝေးပေါ်ထွက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်သင်၏လွှဲလေ့ကျင့်ပျော်မွေ့ရှာတွေ့လိမ့်မယ်. ပြီးတော့ဘာပဲအကြောင်းပြချက်အတွက်သင်မကျင့်, အနည်းဆုံးသင်က tan ရလိမ့်မယ်. အဆိုပါ Range တွင်နေအိမ်
လင်းယုန်ပင်လယ်ရှာဖွေစက် 500C – သင့်ကိုပိုကောင်းတဲ့တံငါဖြစ်စေခြင်း
Eagle Sea Finder 500C သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောငါးရှာစက်ဖြစ်သည်။? ဒါပေမယ့်, အဘယ်ကြောင့်, သင်မေးကောင်းမေးလိမ့်မည်, ဒါဟာသင့်အတွက်အလွန်ကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုပါ?? ဒီ 500C ငါးရှာဖွေရေးကိရိယာသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်သူမည်သူမဆိုအားအစပြုသူမည်သူမဆိုထံမှအလွန်အဖိုးတန်စေသည့်အင်္ဂါရပ်အချို့ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။? သင်ကချစ်လိမ့်မယ်! ပထမ, ကျနော်တို့ display ကိုနှင့်အတူစတင်။? 500C ကငါးလက်မကမ်းပါတယ်, ရှိသည့်ထောင့်ဖြတ်မျက်နှာပြင် 256 အရောင်များ, တက်ကြွ matrix ကို TFT LCD ကို။? သို့ပြန်ဆိုသောအရာအားလုံးကဘာလဲ?? ၅ လက်မဖန်သားပြင်တွင်အရောင်နှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကိုပေးစွမ်းသည်။? ၎င်းသည်ပျမ်းမျှအရွယ်အစားမျက်နှာပြင်အကြောင်းပါ ၀ င်သော်လည်း၎င်းသည်အရည်အသွေးကောင်းသည့်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။? ဒီတော့, အောက်မှာဖော်ပြထားတာတွေကိုအလွယ်တကူတွေ့နိုင်ပါတယ်။? ၎င်းသည်မြင့်မားသောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ဖြစ်၍ သင်မြင်သောအရာများကိုမှတ်မိနိုင်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။? backlit မျက်နှာပြင်နှင့် keypad နှင့်အတူ, သငျသညျနေ့သို့မဟုတ်ညဉ့်ကိုငါးဖမ်းနိုင်ပါလိမ့်မယ် (ရေကန်ပေါ်မှာသူတို့အားအစောပိုင်းနံနက်ခရီးများအတွက်ကောင်းမွန်သည်!)? ပြီးတော့, ၎င်းသည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည့်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းသည် menu display များနှင့် overlay features များမှတဆင့် sonar graph ကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။? တစ်နည်းပြောရရင်တော့, သင်လိုချင်သည့်မည်သည့်နည်းကိုမဆိုသုံးနိုင်သည်။ ရလဒ်ကောင်းများရနိုင်သည်. ဒါပေမယ့်, ငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာ၎င်း၏အခြားအင်္ဂါရပ်အချို့ကိုဖော်ပြရန်ရှိသည်။? ၏အတိမ်အနက်ကိုအတူ 1500 ပေ, နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စွမ်းရည်, ဒီဟာအလွန်ကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်? ၎င်းသည်အပိုကျယ်ပြန့်သောထောင့်ကိုမြင်နိုင်ရန်သင့်အားပိုမိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ပိုမို၍ အထင်ကြီးဖွယ်ကောင်းသောပုံများရရှိစေသည်။? သင်၏ငါးစွမ်းရည်မြင့်မားသော sonar အပြင်၎င်း၏အခြားစွမ်းရည်များကိုလည်းသင်၏ငါးသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်, တည်နေရာမှperfectlyုံချပစ်ရန်, ငါးစာနှင့်သင်တန်းအတွက်သူ့ကိုဆွဲဆောင်ရန်, ထိုငါးကိုသင်္ဘောပေါ်သို့တင်ရန်။? ဒီလိုလုပ်ဖို့စွမ်းရည်ရှိခြင်း, သငျသညျအနည်းဆုံးပြောသင်အောင်မြင်သောတံငါဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်! လင်းယုန်ပင်လယ်ရှာဖွေစက် 500C – သင့်ကိုပိုကောင်းတဲ့တံငါဖြစ်စေခြင်း
သင်၏ Swing အားကောင်းလာစေရန်ဂေါက်သီးအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ
သင်၏ swing ကိုအားဖြည့်ရန်ဂေါက်သီးအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စွမ်းအင်နှင့်အကွာအဝေးကိုတိုးတက်စေရန်သင်ပြုလုပ်ခဲ့သမျှတွင်ပညာအရှိဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်. သင်၏လှည့်စားမှုကိုအားကောင်းလာစေရန်ထိုလှောင်ပြောင်လေ့ကျင့်ရေးအထောက်အကူများကိုသင်ကြိုးစားခဲ့ဖူးလား? သို့ဆိုလျှင်, အောင်မြင်ခဲ့တယ်? ငါမှန်းဆနိုင်ပါတယ်, သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့ကိုသိပ်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. ယခုခရီးသွားသူအများစုသည်ယခုအခါဂေါက်သီးတွင်လေ့ကျင့်ခန်းကို အသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏အရှိန်ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ကားမောင်းရန်အကွာအဝေးတက်လာသည်ကိုတွေ့မြင်နေရသည်. ထိုအ yes'heir ပစ္စည်းကိရိယာများကနှင့်အတူလုပ်ဖို့နည်းနည်းရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အားလုံးအကြွေးယူလို့မရပါဘူး. ငါအကြိမ်ထောင်ပေါင်းများစွာကဆိုပါတယ်ပါပြီ, '' ဒါဟာဂိမ်းကစားကြောင်းကိုသင်၏ခန္ဓာကိုယ်ပါပဲ, မင်းရဲ့ကိရိယာမဟုတ်ဘူး '. ကြောင်းသင်ဖို့အဓိပ္ပာယ်လုပ်မထားဘူး? မည်သည့်အားကစားသမားမဆိုသို့မဟုတ်သူမသည်သူတို့၏အားကစားနှင့်သက်ဆိုင်သော၎င်းတို့၏ကြွက်သားများကိုအားဖြည့်ရန်အချိန်များစွာကိုအသုံးပြုသည်. အဘယ်ကြောင့်သင်တစ် ဦး ဂေါက်သီးအဖြစ်သင်အတူတူပါပဲလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ? ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီးသောအခါသင်သည်၎င်းကိုကောင်းစွာထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်. သင်၏ swing ကိုအားဖြည့်ရန်ဂေါက်သီးအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်တည်ငြိမ်သောဘောလုံးကိုအသုံးပြုသည်, လေ့ကျင့်ခန်းပြွန်, handweights နှင့်ပင်အလေးချိန်ရှိသောဆေးဘောလုံးဖြစ်သည်. ဤရွေ့ကားအားလုံးသည်သင်၏ဂိမ်းအပေါ်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်ကိုစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဂေါက်သီးလေ့ကျင့်ရေးကိရိယာများဖြစ်ကြသည်. ဂေါက်သီးကစားသမားဘယ်လောက်များများကိုငါမပြောနိုင်ဘူး (ထောင်ပေါင်းများစွာ) ငါ့ကိုသူတို့ရဲ့ပါဝါအတွက်သူတို့ရဲ့အံ့သြဖွယ်တိုးတက်မှုပြောပြပြောပြငါ့ကိုအီးမေးလ်ပို့ရန်ပါပြီ, သူတို့ရဲ့လွှဲအားကောင်းလာစေရန်ဂေါက်သီးအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းအသုံးပြုခြင်းမှအကွာအဝေးနှင့်တိကျမှု. ၎င်းသည်သင့်အားဝက်ကဲ့သို့ချွေးထွက်ခြင်းနှင့်သင်၏အားကစားရုံ၌နာရီပေါင်းများစွာအချိန်ဖြုန်းခြင်းများကိုမထားခဲ့ပါ. တကယ်တော့မင်းကိုငါပြောနေတာငါဂေါက်သီးလေ့ကျင့်ပေးဖို့အားကစားရုံမလိုဘူး. အထက်ပါဂေါက်သီးလေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူ, သငျသညျထက်နည်းအတွက်ရိုးရှင်းသောဂေါက်သီးလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကိုလုပ်နိုင်ပါတယ် 30 မိနစ်ပိုင်းအတွင်း 'သင်၏အိမ်တွင်'. ယခုအချိန်ကုန်ငွေကုန်ကြေးကျများခြင်းနှင့်အားကစားခန်းမတစ်ခုအားတက်ရန်မလိုအပ်သောငွေကြေးစုဆောင်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်. သင်၏လွှဲအားကောင်းလာစေရန်ဂေါက်သီးအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းကိုအသုံးပြုခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းသည်အချိန်အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြင့်အမြန်ရလဒ်များကိုအာမခံပေးသောတစ်ခုဖြစ်သည်. သင်၏ Swing အားကောင်းလာစေရန်ဂေါက်သီးအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ
There are several different kinds of kayaking. Although some people like the thrill of whitewater or ocean waves, some people are looking foramore relaxing experience. There are many differences between recreational kayaks and whitewater, ocean or racing kayaks. Recreational kayaks are built for your pleasure. These kinds of kayaks are more popular and easier to find. They are made for all skill levels of kayakers but mostly for people who simply enjoy the sport. Buyingakayak for any of these reasons is reasonable and very enjoyable. Recreational kayaking is great exercise. It is so fun that you do not even realize that you are exercising. That’s the best part. If you are an avid fisher, you might want to consider switching fromamotorized boat toakayak. Kayaks are more relaxing and disturb the water less. It isawonderful way to relax all day. These kayaks are designedalittle differently than other kayaks. They haveabigger cockpit to make it is easier to get in and out of it. They also usually measure less than 12 ပေ, making them lighter, easier to handle in and out of the water,abit slower and less expensive. But speed is not important because those who buy these kayaks are interested in leisure and recreation not speed and competition. These kayaks tend to have much less cargo space. But that makes no difference to buyers, because they do not require extra space forarelaxing ride down the stream. If you are looking foranew hobby or want find great scenery for your newfound love of photography, kayaking could be the solution. You are in complete control of this exciting hobby. Recreational kayaks are inexpensive and perfectly suited to the needs of leisure and recreation. Test it for yourself. You will immediately discover that it is relaxing and thoroughly enjoyable. If you feel that kayaking is something you would like to learn more about there are several excellent resource sites on the internet. You could soon be paddling your way downstream onabeautiful summer’s day, enjoying your new hobby. Take It Easy – Kayaking For Fun
အွန်လိုင်းဝက်ဘ်ဂိမ်းများ ‘ 3: D ဘိလိယက်
အွန်လိုင်းဝက်ဘ်ဂိမ်းသည်ကစားသမားများအားရွေးချယ်စရာများစွာပေးသည်, ယုတ္တိဗေဒ၏ရိုးရှင်းသောဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းမှသည်ရှုပ်ထွေးသည်, 3ဘိလိယက်ကဲ့သို့သောဂိမ်းများကိုအမှန်တကယ်မျိုးပွားစေသောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရှိသောဂိမ်းများ, ဘောလုံး, ဘေ့စ်ဘော, စသည်တို့. မော်နီတာပေါ်မှာ. ဘိလိယက်သည်လူကြိုက်များသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကစားနိုင်သည်, သို့မဟုတ်ပင်ဆဲလ်ဖုန်း. အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရှာဖွေခြင်းသည် 3D billards ဂိမ်းကိုသင်ဒေါင်းလုဒ် လုပ်၍ ကစားနိုင်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသင့်သည်. ကစားနိုင်သည့်စည်းမျဉ်းများနှင့်အမျိုးအစားများသည်တူညီသည် – 8 ဘောလုံး, 9-ဘောလုံးသို့မဟုတ်ဖြောင့်ရေကန်. ပုံမှန်အားဖြင့်ဘိလိယက်ဂိမ်းသည်မောက်စ်နှင့်ကီးဘုတ်ခလုတ်များကိုအသုံးပြုသည်. အသုံးပြုသောထိန်းချုပ်မှုနမူနာများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်. ထိန်းချုပ်ရန် - ရည်ရွယ်ထားရန် “က” သော့ (သို့မဟုတ် mouse ကိုအပေါ် left button ကို) နှင့် mouse ကိုရွှေ့. -ချဲ့ရန်သို့မဟုတ်ချုံ့ရန် “FROM မှ” သော့နှင့် mouse ကိုလှုံ့ဆော်ပေး. -ကိုင်ရိုက်ကူးဖို့ “S” mouse ကိုရွှေ့ပါ. -အင်္ဂလိပ်စာကိုထိန်းညှိရန် “အီး” သော့နှင့် mouse ကိုရွှေ့. -overhead ကင်မရာတွန်းအားကိုပြောင်းလဲပစ်ရန် “အို” သော့. -overhead ကင်မရာကိုလှန်လှောရန် “X” သော့. -3D ကင်မရာတွန်းရန် “ဂ” သော့. -ဘောလုံးလမ်းကြောင်းလိုင်း၏ပြသမှုအတွက် “L” သော့. -တေးဂီတဖွင့် / ပိတ်ရန်တွန်းအားပေးသည် “M” သော့. ကစားရန်မည်သို့ - ဘောလုံးကိုရွှေ့။ ကြွက်ကို သုံး၍ တုတ်ကိုချိန်ညှိပါ. ဘောလုံးကိုရိုက်ကူးရန်အတွက် mouse ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ. စွမ်းအင်ပိုမိုရရှိရန်အတွက် mouse ခလုတ်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာကိုင်ထားပြီးအပြန်အလှန်အားဖြင့်. 8 ဘောလုံးဂိမ်း -2 ကစားသမားလည်းကစားနိုင်ပါတယ်. ဤနေရာတွင်အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာသင်၏ပြိုင်ဘက်များရှေ့တွင်သင်၏ဘောလုံးများကိုအိတ်ကပ်ထားရန်ဖြစ်သည်.9ဘောလုံးဂိမ်း - ဒီဂိမ်းကိုအသုံးပြုပြီးကစားသည်9ရေတွက်ဘောလုံး, နှင့် cue ဘောလုံးကို. cue ball ကိုဝင်သောပထမဆုံးဘောလုံးသည်နံပါတ်နည်းရမည်. အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတစ်ခုလုံးကိုအိတ်ကပ်ထားဖို့ဖြစ်တယ်9ပြိုင်ဘက်မတိုင်မီဘောလုံး. အခမဲ့အွန်လိုင်းဝက်ဘ်ဂိမ်းများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကကြည့်ရှုပါ: အွန်လိုင်းဝက်ဘ်ဂိမ်းများ ‘ 3: D ဘိလိယက်
ဘတ်ဂျက်အပေါ်စက်ဘီးနဲ့ Run စွန့်စားမှုပြိုင်ပွဲ
Gerald Fusil သည်သူ၏အကြံဥာဏ်များကိုအမြဲတမ်းလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ပြီးအခြားသူများကလိုက်နာကျင့်သုံးသောသူဖြစ်သည်. အဆိုပါ Raid Gauloises ကိုတည်ထောင်သူ, ကမ္ဘာ့ပထမ ဦး ဆုံးစစ်မှန်တဲ့လေ့လာရေးခရီးပြိုင်ပွဲအားကစားတိုးချဲ့ဖို့အမြဲစောင့်ကြည့်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်. စွန့်စားမှုပြိုင်ပွဲများတွင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်အသင်းအနည်းငယ်မှယခုတတ်နိုင်သောအဆင့်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်. စီစဉ်သူများနှင့်စွန့်စားမှုပြိုင်ကားသမားများသည်မြင့်မားသောခရီးသွားလာရေးနှင့်အာမခံကြေးစရိတ်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်. ပြိုင်ကားသမားများကိုဆွဲဆောင်ရန်နည်းတစ်နည်းမှာကြီးမားသောငွေပမာဏကိုဆုကြေးငွေပေးရန်ဖြစ်သည်, နှင့်ထိပ်တန်းအသင်းများကိုတစ် ဦး လူနေမှုစေနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်အဘယ်သို့သောပျမ်းမျှပြိုင်ကားသမားကော. ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က, နှစ်စဉ် Reunion D'Aventures ပြိုင်ပွဲကာလအတွင်း, Gerard Fusil သည်စက်ဘီးတစ်စီး ထပ်မံ၍ စည်းကမ်းလိုက်နာစေသည့်အတွက်ပြိုင်ပွဲ၏ခြေထောက်နှစ်ချောင်းအတွင်းလူလေးယောက်အဖွဲ့ကိုတောင်တက်စက်ဘီးနှစ်စီးမျှဝေရန်လိုအပ်သည်။. အဖွဲ့များသည်ခြေထောက်များကိုအမြန်ဆုံးပြီးအောင်လုပ်ရန်နည်းဗျူဟာများကိုစဉ်းစားရန်ဖိအားပေးခံခဲ့ရသည်. အချို့အသင်းများသည်ကုန်းမြင့်ပိုင်းတွင်နှစ်ဆတက်လာသည်, အခြားသူများကတည်းခိုခဲ့သည်, ပိုမိုအောင်မြင်သောကြောင့်စက်ဘီးကိုသူတို့အသင်းဖော်အတွက်လမ်းကြောင်း၏အစွန်းတွင်မထွက်ခွာမီမြင်းစီးသူရဲသည်သတ်မှတ်ထားသောအကွာအဝေးသို့သွားသောအခါထပ်ဆင့်လွှင့်မှုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ပါ။, အဘယ်သူသည်အပေါ်ရပြီးတော့သူတို့ကိုခုန်လိမ့်မယ်. Gerard Fusil သည် Expedition Adventure Racing ကိုပြန်သွားရန်အခွင့်အရေးကိုမြင်ခဲ့သည်. အသင်းများအားတိုင်းပြည်တစ်ခုကိုလေ့လာရန်အခွင့်အရေးပေးသည်, ဂီယာအမြောက်အမြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်မလိုအပ်သည့်အပြင်ထူးခြားဆန်းပြားသောနေရာများရှိဒေသခံလူ ဦး ရေနှင့်အပြေးပြိုင်ခြင်း. Gerard Fusil သည်သူ၏အတွေးအခေါ်များကို Reunion D'Aventures ဆုပေးပွဲတွင်ကြေငြာခဲ့ပြီးကမ္ဘာကြီးသည်အနံနှင့်အညီစောင့်မျှော်နေကြသည်။. စက်တင်ဘာ 2005 Gerard Fusil သည် Oman Adventure နှင့်အတူကမ္ဘာသို့စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ပြေးခြင်းသဘောတရားကိုစတင်ခဲ့သည်. အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်, လူနှစ် ဦး အဖွဲ့သည်စက်ဘီးတစ်စီးတည်းကိုလူတစ် ဦး တည်းနှင့်သာမျှဝေရန်တစ်ချိန်တည်းတွင်ရှိသည်. အပြေးပြိုင်ပွဲကိုညအိပ်ရာနေရာများအပါအ ၀ င်အဆင့်များစွာတွင်အပြေးပြိုင်ပြီးတောရိုင်းတွင်စခန်းချရန်အသင်းများကိုပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်. အချိန်တိုတောင်းသောကြောင့် Gerard Fusil သည်သင်တန်းမှမှတ်စုများကိုအသုံးပြုခဲ့သည် 1992 သင်တန်း၏အစိတ်အပိုင်းများအတွက် Raid Gauloises. Gerald Fusil သည်နေထိုင်မှုတစ်ခုစီ၏ကြာရှည်မှုနှင့်ညအိပ်ယာယီစခန်းများ၏အမည်များကိုကြိုတင်ကြေငြာခြင်းဖြင့်အခြားစံတစ်ခုမှအခြားတစ်နေရာသို့ထွက်ခွာခဲ့သည်။. အပြေးပြိုင်ပွဲသည်အိုမန်အရှေ့ကမ်းရိုးတန်းတွင်ဖြစ်သည်, သို့သော်အချို့နေရာများအမည်များကိုသာဒေသခံများသိကြသည်. ? ဒီဇင်ဘာ 2005. Gerard Fusil သည်ပြင်သစ်မှစုဆောင်းထားသည့်အဖွဲ့များအားအကျဉ်းချုံးနေစဉ်ပင်လယ်နားတွင်စိမ်းလန်းစိုပြည်သောညနေခင်းတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရသည်, အိုမန်, ဗြိတိန်, R'union, သြစတြီးယား, ဟော်လန်နှင့်သြစတြေးလျ. အသင်းအများစုသည်နံနက်အချိန်တွင်ရောက်ရှိလာပြီးပြင်ဆင်ရန်အချိန်အနည်းငယ်သာရှိသည်. ပံ့ပိုးမှုမော်တော်ယာဉ်များကိုအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲဝေထားသည်, ပြိုင်ဘက်များသည်မြေပုံများနှင့်ဂီယာထုပ်ပိုးခြင်းကို torchlight အားဖြင့်ညအချိန်တွင်ကုန်လွန်စေခဲ့သည်. နောက်တစ်နေ့အရုဏ်တက်ချိန်တွင်ယာဉ်တန်းတစ်စုသည်အဖွဲ့အားအနီးအနားရှိ ၀ တီရှိစတင်သည့်လမ်းကြောင်းသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်. ပထမနေ့တွင်ဆိတ်လမ်းကြောင်းများတစ်လျှောက်သာပြေးဆွဲခြင်းပါဝင်သည်။ သြစတြေးလျနှင့်ဒေသခံအိုမီနီအသင်းတစ်ခုမှပြင်သစ်အသင်းအားမရရှိနိုင်သည့် ဦး ဆောင်လမ်းပြမှုကိုခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းကြောင့်အဆုံးအဖြတ်ပေးခဲ့သည်. တစ်ပတ်အကြာတွင် Gerard Fusil သည်ပင်လယ်မှ ၁၇ ကီလိုမီတာလိမ်သည့်တောင်တက်ခြင်းဖြင့်လမ်းကြောင်းကိုမြေပုံဆွဲခဲ့သည် 1500 ရေကူးများစွာနှင့်အတူမြစ်ချောင်းတစ်အပိုင်းလည်းမီတာ. Gerard Fusil သည်သာယာလှပသည့်နေရာများစွာတွင်စခန်းချခြင်း (သို့) bivouacs များကိုစီစဉ်ပေးခဲ့သည်, နံနက်စောစောပိုင်းတွင်အဆင့်များစတင်ခြင်းဖြင့်အသင်းအများစုသည်နေ့လယ်ပိုင်းသို့မဟုတ်မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်. အိုမန်ပြည်နယ်၏မြေမျက်နှာသွင်ပြင်သည်စိမ်းလန်းစိုပြေသောအိုအေစစ်မှသည်ကြမ်းတမ်းသောကျောက်တောင်စောင်းများနှင့်သဲသောင်ပြင်များသဲသောင်ပြင်များပြီးဆုံးသည့်နေရာများဖြစ်သည်။. Gerard Fusil သည် Muscat တွင်ပြင်သစ်မှလင်နှင့်ဇနီးအဖွဲ့ Wilsa Sport Helly Hansen ဖြစ်သည့်ဆုရရှိသူများကိုဆုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။. ဒုတိယနေရာမှာသြစတြေးလျနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပြီး၊ အိုမန်အဖွဲ့ကတတိယနေရာမှာရှိတယ်. အဖွဲ့များသည်နောက်ခံအမျိုးမျိုးမှလာကြသည်, စွန့်စားမှုပြိုင်ကားသမား, အားကစားသမားသုံးမျိုး, မာရသွန်အပြေးသမား, တောင်ကြီးသမား; နောက်ဆုံးအရေအတွက်ကစွန့်စားခန်းပြိုင်ကားသမားတွေကိုမြင်တာပဲ. အားလုံးနီးပါးအသင်းများကခုန်ပျံကျော်နင်းခြင်း၏အထွေထွေနည်းဗျူဟာကိုကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်, အသင်းများကဆိုင်ကယ်ကိုလွဲချော်သွားသောအခါအနည်းဆုံးဖြစ်ရပ်အနည်းငယ်ရှိသည်, စက်ဘီးစုဆောင်းရန်အပို 4k လိုအပ်သည့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အားလုံးအတွက်ရှည်လျားသောတောင်တက်ခြင်းတွင်တစ်ခုအပါအ ၀ င်! အဖွင့်ပြိုင်ပွဲသည်အောင်မြင်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပြီးယခု Gerald Fusil သည်ဒုတိယစီးပြိုင်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းတွင်ကွဲပြားသောအိုမန်ဒေသသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။. ဘတ်ဂျက်အပေါ်စက်ဘီးနဲ့ Run စွန့်စားမှုပြိုင်ပွဲ
RC car racers have to make itapoint that collision should be the last thing that can damage their vehicle. ဒါပေမယ့်, with the speed RC cars are capable of doing while on track, collision isacommon scenario. If you areanewbie to handling RC cars asahobby, there are some basics that you need to know. These basics are good for the type of RC vehicle that you own and for your own knowledge in RC racing. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, shock absorbers or as it is popularly known, shocks, keep the vehicle suspended parallel to the tires and ground below it. A good set of shocks assure the owner that the chassis ofaRC car doesn’t touch the track nor does it cause the tires of the car to stray away. Keepingagood set of shock absorbers is the tricky part, so before entering any racing competition, test several set of shocks which you think would be effective in keeping your RC car chassis off of the racetrack. Everybody knows that shock absorbers consist ofagood set of springs as this allows the car to maintain the standard height from0level. For better performance though,asoft type of spring is preferred. As mentioned, it is better for you to test several springs atatime before enteringacompetition. You’ll be the judge of the height of the chassis from the ground and whether the ‘feel’ of the spring already suffices your preference. To put your RC car under smooth control even if it bumps another car on track or experiences an ordinary bump, be sure you have the right amount of shock oil absorbed on the springs of the car. An appropriately positioned pistons absorb the excess energy caused fromacollision or impact. This results to the steady motion ofavehicle. Keeping your RC car free from unsteady movement and unnecessary bounce will give you peace of mind when driving it around or even when inacompetition. Keeping Your RC Car Steady
Almost half the world-wide market for athletic shoes is right here in the US. Thanks to an aggressive marketing plan and succession of shrewd endorsements, it has been dominated by the Nike ‘swoosh’. Inabusiness saturated with players, Nike’s 36% market share representsasubstantial margin over the competition. How much is 36% of the market? Only sales in the neighborhood of $7.2 ဘီလီယံ, that’s all. Enough cash to buy every franchise in the NBA. Isn’t it justalittle ironicacompany that propelled it’s period of rapid growth onaproduct launch and endorsement campaign grounded on the NBA’s brightest star, could onawhim, buy the whole league? Not everything is rosy for Nike in the athlete’s foot market. Of the 50 or so ‘other manufacturers’, number two Adidas has completedamove to presentamajor challenge. Athletic footwear is divided into two sectors. Competitive which drives innovation to set the mainframe, and fashion which spins casual wear market entries off from the mainframe. Around the rest of the world, Adidas has long been the leader in competitive footwear. It was Adidas that really started it all, sneaking their3stripe trademark past stringent Olympic and World Cup sponsorship regulations of the 1950’s to give birth toawhole new industry Adidas has acquired number3Reebok for $3.8 ဘီလီယံ, giving thema21 percent US market share. Most significant about this deal is Reebok holdsamuch firmer grip on the fashion market than Adidas ever has. Each brand will keep it’s identity, but expect to see some new forms cross brand marketing invented to capitalize on the strenghts of each. The Reebok brand blended into the Adidas mix meansasavvy competitor for Nike to deal with across the full market range. Expect Nike to dig deep and find creative ways to fight them off. The big business of whose sport shoe they put on their feet assures consumersanew round of innovative choices will be soon on the way. Athletes Foot
လှေသည်အလွန်စိတ်ပြေလက်ပျောက်အပန်းဖြေအနားယူနိုင်ပါသည်, ဂရုစိုက်စရာမလိုဘဲမြစ်သို့မဟုတ်ရေကန်တစ်လျှောက်တွင်မျောနေခြင်း. လူအများစုအတွက်, လှေကိုယ်နှိုက်သည်ဝါသနာ၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်: သင်လှေထဲမှာတခါ, သင်သတ်မှတ်ထားသည်. လူအများစုကသူတို့လှေကိုသူတို့ကားနောက်ဘက်မှာကပ်ထားတဲ့နောက်တွဲယာဉ်တစ်စီးပေါ်ကိုသွားဖို့သွားကြတယ်, လှေအလုံအလောက်သေးငယ်သည်ထောက်ပံ့ပေး ‘ ပိုကြီးတဲ့စက်လှေတွေကို Marina မှာထားရမယ်, အရာစျေးကြီးနိုင်ပါတယ်. ဒီနေ့တောင်မှ, လူအများစုကသစ်သားထက်ပိုပြီးကိုယ်ပိုင်လှေများကိုတည်ဆောက်နေကြသည်, လက်သည်းများနှင့်လိမ္မာပါးနပ်. အမျိုးမျိုးသောလှေများရှိပါသည်, အလွန်သေးငယ်သောမှသည်အလွန်ကြီးမားသည်. အသေးဆုံးလှေများမှာလူတစ် ဦး တစ်ယောက်အားထိရောက်စွာလှေလှော်ရန်ဒီဇိုင်းဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်, ထို့နောက်မိသားစုအရွယ်ရှိလှေငယ်များပါ ၀ င်သည်. လှေပေါ်မှာလူအများစုကသူတို့မိသားစုနဲ့အတူလှေစီးချင်ကြတယ်, အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ဖခင်, ထိုသို့သောချစ်ခင်ဖွယ်အမှတ်တရများရှိသောကြောင့်သူတို့နှင့်သူတို့မိသားစုကိုအတူတကွယူပါ. ပြီးတာနဲ့သင်သည်အတော်လေးသေးငယ်တဲ့လှေအထက်ရ, သငျသညျ powerboats သို့ရဖို့စတင်ပါ (ထို့အပြင်မြန်နှုန်းမြင့်လှေများနှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်အဖြစ်လူသိများ). သူတို့ကအရမ်းလွန်းလွန်းလှော်ဖို့စတင်, ဒါပေမယ့်အဖြစ်ကြီးမားသောသွားနိုင်ပါတယ် 50 အခန်းနှင့်ကြီးမားသောအင်ဂျင်နှင့်အတူပေရှည် ‘ တစ်နည်းပြောရရင်တော့, သငျသညျကားတစ်စီးကဲ့သို့ကြီးမားသောနှင့်ကုန်တင်ကားကဲ့သို့လောက်ကြီးသောအကြောင်းကို powerboats ရနိုင်သည်. လှေပျော်စရာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, သို့သော်, ၎င်းသည်သင်ဘေးကင်းရေးကိုအထူးဂရုပြုရန်လိုအပ်သည့်ဝါသနာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်. နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းများစွာသောလှေသမားများသေဆုံးသည်, အဓိကအားဖြင့်ရေကြောင်းပြုတ်ကျခြင်းနှင့်ရေနစ်သေဆုံးသည်. သင်ကသာမန်အသိဥာဏ်ကိုအသုံးပြုရန်နှင့်သက်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုဆိုင်ရာဥပဒေများကိုလိုက်နာရန်သေချာစေရန်အရေးကြီးသည်, အထူးသဖြင့်အမြဲတမ်းသင်နှင့်အတူအသက်ကယ်အင်္ကျီကိုယူပြီးအားဖြင့်. ဒါပေါ့, လှေရုံန်းကျင် cruising မှလုံးဝကန့်သတ်မထားပါ. သင်သည်သင်၏လှေ၏နောက်ကျောတွင်ရေစီးကြောင်းများကိုလည်းတည်ဆောက်နိုင်ပြီးရေပေါ်နှင်းလျှောစီးသွားနိုင်သည်, သို့မဟုတ်ပင်လှေလူမျိုးရိုက်ထည့်ပါ, သင်ထင်လျှင်သင်အလုံအလောက်အစာရှောင်ခြင်း. သင်တို့သည်လည်းငါးမျှားနိုင်ပါတယ်, ရေချိုနှင့်ရေငန်နှစ်ခုလုံး, ရေချိုငါးဖမ်းခြင်းနှင့်အတူလှေနှင့်အတူလုပ်ဖို့လူကြိုက်အများဆုံးအရာတစျခု. လှေသည်အလွန်စိတ်ပြေလက်ပျောက်အပန်းဖြေအနားယူနိုင်ပါသည်
သက်တန့်ရောက်ရေချိုငါးကို ၁၉၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းတွင်အမေရိကန်မှယူကေသို့စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်. ဤနိဒါန်းသည်ကြီးထွားလာနေသောစက်မှုလုပ်ငန်းကြီးများဖြစ်သော Bristol နှင့် Birmingham တို့အတွက်ရေပိုရရှိရန်လိုအပ်ချက်နှင့်တိုက်ဆိုင်နေသည်. အားလုံးသောသဘာဝတွင်မျိုးပွားနိုင်ခြင်းမရှိသောငါးများအတွက်ဗြိတိန်မြစ်အချို့ မှလွဲ၍ Rainbow ရောက်ရေချိုငါးသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်. ၎င်းသည်အညိုရောင်ရောက်ရေချိုငါးနှင့် shoaling ၏အလေ့အထနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အစာကျွေးရန်စိတ်အားထက်သန်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်. ဤနှစ်ခုလုံးသည်မကြာမီတွင်တံငါသည်များ၏အကြိုက်ကိုဖြစ်စေခဲ့ပြီး Rainbow ရောက်ရေချိုငါး၏လျင်မြန်စွာကြီးထွားမှုနှုန်းကြောင့်ငါးမွေးမြူသူလည်းအကြိုက်ဖြစ်ခဲ့သည်။. ထိုဆီမွှေး၌တစ်ခုတည်းသောယင်ကောင်သည်မတူညီသောသက်တန့်အမျိုးအစားနှစ်ခုကိုအသုံးပြုခဲ့သည် ‘ အဆိုပါ Kamloops နှင့် Shasta strain. ကံမကောင်းစွာဖြင့်ဤမျိုးကွဲများသည်နှစ်တစ်နှစ်၏အချိန်များတွင်လိင်ရင့်ကျက်လာသည်. ရလဒ်အနေဖြင့်ငါးဖမ်းသူများသည်အရောင်တောက်တောက်နေသည်’ နှောင်းပိုင်းနှင့်အစောပိုင်းရာသီအတွက်ငါး. ကြက်ဥကုသမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်မြုံသောအမျိုးသမီးများဖြစ်သော Diploid သက်တန့်ရေချိုငါးများထုတ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်. ဤသည် ‘စင်ကြယ်ခဲ့သည်’ တစ်နှစ်ပတ်လုံးငါး. အပိုဆုအဖြစ်ဤရောက်ရေချိုငါးလည်းပိုမြန်ကြီးထွားလာခဲ့သည်. ဤအ '' sexless ၏နိဒါန်း’ သက်တံ့ရောက်ရေချိုငါးသည်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းအတွက်နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုရရှိခဲ့သည်. သက်တံ့ရောက်ရေချိုငါးအတွက်ပိတ်ထားသောရာသီကိုဖျက်သိမ်းရန်တံခါးဖွင့်လိုက်သည်. ငါးဖမ်းသမားများနှင့်တံငါသည်များ၏ဖိအားကြောင့်ပိတ်ထားသောရာသီကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည်. ငါးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များသည်ဤပြောင်းရွှေ့မှုမှအကျိုးကျေးဇူးခံစားခဲ့ရပြီးမကြာမီတွင်ဤ diploid သက်တန့်ကြီးထွားနှုန်းမြန်လာခြင်းကြောင့်အမျိုးသားစံချိန်သစ်တင်သောငါးအသစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။. ရလဒ်အနေနှင့်ငါးမွေးမြူသူများအကြားငါးဖမ်းသူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပိုမိုကြီးမားပြီးသက်တန့်ကြီးထွားရန်ငါးမွေးမြူသူများအကြားပြိုင်ပွဲစတင်ခဲ့သည်. ဤ race ဂျမ်ဘိုသိုလှောင်ရန်ငါးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များအကြားနောက်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုစတင်ခဲ့သည်’ တံငါသည်များကိုငါးဖမ်းရန်ဆွဲဆောင်ရန်သက်တန့်. ရွေးချယ်မွေးမြူခြင်းကသက်တန့်နှင့်အဝါရောင်ရောက်ရေချိုငါးများ၏ကြီးထွားနှုန်းကို ပို၍ ပင်တွန်းအားပေးခဲ့သည်. ပြင်းထန်သောအစာကျွေးခြင်းအစီအစဉ်များနှင့်ကြက်ဥကုသခြင်းတို့နှင့်အတူဤသည်ယနေ့ဂျမ်ဘိုသက်တံများကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်. ၎င်းသည်ငါးအမျိုးအစားစာရင်းတွင်လုံးဝရှုပ်ထွေးသောအခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးယခုအခါရေချိုငါးမျိုးစိတ်များအတွက်သီးခြားမှတ်တမ်းများရှိနေသည်. ယခုအချိန်တွင်ရေထဲတွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာရှိနေသောငါးများနှင့် 'ရိုင်း' သောငါးများနှင့်မကြာသေးမီကသိုလှောင်ထားသောငါးများအတွက်သီးခြားမှတ်တမ်းများရှိသည်။. မှတ်ချက်. လက်ရှိဗြိတိန်နိုင်ငံ၏သက်တန့်ချိုင့်သည် ၃၃ ပေါင်ရှိသည်. 4oz. ယူကေရှိသက်တင့်ရောက်ရေချိုငါး.
သင့်ရဲ့ဂေါက်သီးလွှဲတိုးတက်အောင်ဘယ်လို –7သိကောင်းစရာများ,7လေဖြတ်,7နေ့ရက်များ
ဒီမှာပါ7သင်၏ဂေါက်သီးကစားနည်းကိုချက်ချင်းလျှောက်ထားနိုင်ပြီးသင်မကြာမီလေဖြတ်ခြင်းကိုခံရနိုင်သည်. သင်၏ဂေါက်ဂေါက်တုံးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ 1. အဘို့သင့်ကြွက်သားဆန့်5သင်ပထမ ဦး ဆုံး Tee မတိုင်မီမိနစ်. ပူနွေးလာခြင်းနှင့်ဆန့်ခြင်းတို့သည်သင့်အားပထမ ဦး ဆုံးတွင်းအနည်းငယ်အတွင်းစမ်းကြည့်ပါကသင်၏ဂိမ်းကိုထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။. သင်၏ဂေါက်ဂေါက်တုံးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ 2. သင့်ရဲ့လွှဲနှေး. အကယ်၍ ပိုမိုနှေးသောချောမွေ့သောနှုန်းထားကိုသင်အာရုံစိုက်ပါကသင်သည်ဘောလုံးကိုပိုမိုဖြောင့်မတ်ပြီးပိုမိုကြာကြာနှိပ်မိနိုင်သည်. သင်ဘောလုံးကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကြိုးစားရန်ကြိုးစားသောအခါသင်၏မှားယွင်းသောလွဲချော်မှုများသည်ကြီးမားသောအချိန်ဖြစ်လာလိမ့်မည်. သင်၏ဂေါက်ဂေါက်တုံးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ 3. ဘောလုံးကိုဖြတ်ပြီးကြိုးစားကြည့်ပါ. ဂေါက်ကလပ်များသည်အကြောင်းအရင်းအများအပြားတွင်ရှိသည်. မြက်ပင်များနှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားသောအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားပါ. သင်၏ဂေါက်ဂေါက်တုံးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ 4. ဘောလုံးနောက်ကွယ်တွင်ရပ်ပြီးသင်မလွှဲမီပစ်မှတ်ကိုရွေးပါ. သင့်တွင်ရည်မှန်းချက်ရှိသင့်သည်ထက်ရှေ့ကိုသာ ဦး တည်သင့်သည်. သင်၏ဂေါက်ဂေါက်တုံးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ 5. သင့်ခေါင်းထဲရှိဘောလုံးလေယာဉ်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ. ဂေါက်သီးဟာငါတွေ့တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂိမ်းတစ်ခုကြောင့်ဒီတစ်ခုကငါ့အကြိုက်ဆုံးပါ, တစ်ခါတစ်ရံသင်၏ခေါင်းကိုအသုံးပြုခြင်းကသင့်အားလေဖြတ်စေနိုင်သည်. သင်၏ဂေါက်ဂေါက်တုံးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ 6. ချတဲ့အခါ, သင်၏အကွာအဝေးကို ဦး စွာအာရုံစိုက်ပါ. ကောင်းသောအကွာအဝေးထိန်းချုပ်မှုရှိခြင်းသူတို့အားလှည့်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်3သို့ putts2မည်သည့်အပေါက်ပေါ်တွင် putts. သင်၏ဂေါက်ဂေါက်တုံးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ 7. ဘောလုံးကိုသင်၏မျက်လုံးကိုစောင့်ကြည့်ပါ. ချိုင့်ဝှမ်းမှညာဘက်ကိုဆင်းအာရုံစိုက်ဖို့ကြိုးစားပါ. သင်၏နောက်ကျောကိုလှည့်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်. လာမည့်၌သင်၏ဂေါက်သီးလွှဲတိုးတက်မှုကိုမည်သို့ဤကဲ့သို့သောနောက်ထပ်အကြံပြုချက်များအတွက်7သင်၏ဂေါက်ဂလင်းကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမည်နည်း –7သိကောင်းစရာများ,7လေဖြတ်,7နေ့ရက်များ
ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းအခြေခံလေ့ကျင့်မှုကိုမှန်ကန်သောလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်နှင့်ပေါင်းစပ်သောအခါ, ရလဒ်အံ့ဖွယ်၏တိုတိုဘာမျှမဖြစ်နိုင်ပါ. Song ညီအစ်မများကဲ့သို့သောအငယ်တန်းဂေါက်သီးကစားသမားများတွင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသောအကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေပွဲများကိုပြုလုပ်ပါ, Ty Tyron နှင့် Michelle Wie တို့ဖြစ်သည်. ငယ်ရွယ်သောအငယ်တန်းဂေါက်သီးသမားများ၏အံ့သြလောက်အောင်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမကြာခဏဆွေးနွေးလေ့ရှိသည်. အများအပြားသီအိုရီများနှင့်အကြောင်းပြချက်ရှေ့ဆက်ဆောင်ခဲ့ပါပြီ. သူတို့ထဲကအများစုဟာမမှန်ပါဘူး. ဥပမာအားဖြင့်ဘုံယုံကြည်ချက်တစ်ခုမှာဤလူငယ်ကစားသမားများသည်၎င်းတို့၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုကြောင့်သင်ကြားပေးသောဂေါက်သီးလွှဲအခြေခံများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာတုန့်ပြန်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်. ဒါလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး. အငယ်တန်းဂေါက်သီးသမားနှင့်လူကြီးများအကြားကွာခြားချက်မှာအားသာချက်ဖြစ်ပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မဟုတ်ပါ. ရာနဲ့ချီတဲ့အငယ်တန်းဂေါက်သီးသမားတွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးပြီးအားအင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့အချိန်တိုအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့ဂေါက်သီး drives တွေတစ်ခုလုံးတိုးပွားလာတာကိုအံ့အားသင့်မိပါတယ်။ 50 ကိုက်. သို့သော်လျင်မြန်စွာသတိပေးစကားလုံး. မှားသောအစွမ်းခွန်အားပေးလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းသည်သူတို့၏ဂိမ်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းထက်ကစားသမားအားပျက်စီးစေနိုင်သည်. အငယ်တန်းဂေါက်သီးသမားများနှင့်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်သည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောသံသယမရှိဘဲကျွန်ုပ်အတွက်တစ်ခုခုလက်တွေ့ကျကျသက်သေပြခဲ့သည်. ဒါ့အပြင်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်မှန်ကန်သောဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းများကိုတစ်ချိန်တည်းမှာမှန်ကန်စွာကစားခြင်းအားဖြင့်ဂေါက်သီးလွှဲအခြေခံများကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းသည်အချက်ဖြစ်သည်။, ဘယ်သူ့ကိုမှရဲ့ဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်တိုးတက်စေရန်အလွန်အစွမ်းထက်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. လေ့ကျင့်ခန်းမပါဘဲဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းအခြေခံနှင့် ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်မှုသည်လုံးဝအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ. လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်ဂေါက်သီးလွှဲအခြေခံများပေါင်းစပ်ခြင်း၏စွမ်းအား
ယင်ကောင်ငါးဖမ်းခြင်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိငါးဖမ်းသူများပျော်မွေ့သောအားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်. ဤငါးဖမ်းနည်းသည်ယင်ကောင်များလိုအပ်သည်, အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောလှံတံ. ယင်ကောင်ငါးဖမ်းခြင်းအားကစားသည်အနည်းဆုံးကတည်းကရှိခဲ့သည် 200 A.D. အားကစားနှင့် ပတ်သက်၍ ပထမ ဦး ဆုံးအသိပညာကိုထိုအချိန်ကာလအတွင်းရေးသားခဲ့သောစာအုပ်များတွင်တွေ့ရှိရသည်. ယနေ့အားကစားသည်အလွန်လူကြိုက်များနေဆဲဖြစ်သည်. လူအများစုသည်ငါးမျှားရန်ငါးမျှားတတ်သည်, ဆယ်လ်မွန်, နှင့်ဘေ့စ်. ယင်ကောင်ငါးဖမ်းခြင်းသည်ပုံမှန်ငါးဖမ်းခြင်းနှင့်မတူပါ၊ အကြောင်းမှာသင်သည်လေးလံသောဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်အလင်းတန်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်. အဲဒီအစား, မျဉ်း၏အဆုံးပေါ်အတုယင်ကောင်သုံးပြီး, မင်းကပါးလွှာတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်နဲ့အဆုံးသတ်ရမယ်. မကြာခဏဖဲကြိုးအရောင်, ချည်, သို့မဟုတ်အမွေးယင်ကောင်မှချည်ထားသည်. ဤအရာသည်ငါးကိုသူတို့မြင်သောအရာသည်သူတို့စားသောအမှားတစ်ခုဟုထင်မြင်စေသည်. ယင်ကောင်ငါးဖမ်းပိုက်များသည်ပုံမှန်ငါးဖမ်းပိုက်ထက်ပိုလေးကြသည်, ဒါပေမယ့်မကြာခဏ float ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်. ယင်ကောင်ငါးမျိုးနှစ်မျိုးရှိသည်. အပူပိုင်းယင်ကောင်ငါးဖမ်းခြင်းတွင်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ကျန်ရှိနေသောယင်ကောင်များပါ ၀ င်သည်. စိုစွတ်သောရေယင်ကောင်သည်ယင်ကောင်ကိုရေထဲသို့ကျစေခြင်းဖြစ်သည်. နှစ် ဦး စလုံးနည်းလမ်းများအလွန်ထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်. နည်းစနစ်များအသုံးပြုခြင်းသည်ငါးဖမ်းသူနှင့်အခြေအနေအပေါ်မူတည်သည်. ယင်ကောင်ငါးဖမ်းခြင်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကနေဒါနိုင်ငံတို့တွင်ကျင့်သုံးသည်. ယင်ကောင်ငါးဖမ်းခြင်းအတွက်အသုံးအများဆုံးပြည်နယ်များမှာ Montana ဖြစ်သည်, Utah, အိုင်ဒါဟို, ကော်လိုရာဒို, ကယ်လီဖိုးနီးယား, နှင့်အလက်စကာ. အကြောင်းရင်းမှာကျောက်တောင်ထူထပ်သောareaရိယာမှတဆင့်စီးဆင်းနေသောငါးပမာဏကြောင့်ဖြစ်သည်. West Yellowstone သည်ယင်ကောင်ငါးဖမ်းခြင်း၏အဓိကအချက်အချာဖြစ်သည်. အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဤတွင်ငါးဖမ်းမိသည်. ကနေဒါနိုင်ငံရှိအယ်လ်ဘာတာအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိအခြားareasရိယာများမှာငါးမျှားရန်နေရာကောင်းဖြစ်သည်. ယင်ကောင်ငါး၏အားကစားသည်အလွန်လူကြိုက်များသည်, မကြာမီမည်သည့်အချိန်ဖွင့်တစ်ဆင့်ခြင်း၏နိမိတ်လက္ခဏာနှင့်အတူ. ယင်ကောင်ငါးဖမ်းသူများသည်အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံများစွာ သုံး၍ ငါးဖမ်းခြင်းဖြင့်ပျံသန်းသည်. သူတို့သည်အကောင်းဆုံးပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူပြီးအကောင်းဆုံးငါးဖမ်းနေရာများသို့သွားကြသည်, မြစ်အထက်သို့ကူးနေသောငါးကြီးကိုဖမ်းရန်လုံလောက်သောကံကောင်းခြင်းကိုမျှော်လင့်သည်. ငါးမျှားခြင်း: တစ်ကမ္ဘာလုံးအားကစားတစ်ခု
Kayaking is growing in popularity. It isasport withalot of variations, which are covered below in this article. A Basic Overview of Kayaks and Kayaking At its core, kayaking is simplyamethod of propelling oneself throughabody of water by using ones own power. A paddle is used to do this with the paddle usually having two curved portions on each side to allow foraback and forth action unlike canoeing. This definition, သို့သော်, fails in many ways since there are extremely different types of kayaking. ကြည့်ကြရအောင်. Kayak roughly means hunting boat. It has been used throughout history by people living on shores to pursue food in the ocean. The indigenous people in the Arctic are believed to have been the first kayakers using wood frames covered by animal skins. In modern times, kayaking refers toamuch broader scope of activities. ဒါကဆိုပါတယ်ခံရ, the basic boat remains the same. Kayaks are long, thin and usually one person boats. They come in different forms and styles, which are primarily adapted toaparticular style of kayaking. Sea kayaks are very long and thin, which helps them glide easily through the water. Kayaks designed for running challenging river rapids, သို့သော်ငြားလည်း, are short to facilitate maneuverability and the opportunity to roll to upright oneself after being flipped upside down. While almost all kayaks are designed to have the person sit down in them,acertain class allows the person to site onaflat indention on the top of the kayak. သိသာထင်ရှားတယ်, this type of kayaking is typically done on smooth surfaces such as lakes. As these designs seem to suggest, kayaking comes inalot of forms. Some people love to take them out onacruise aroundabay in Alaska or any ocean areas. Other kayaking enthusiasts prefer to shoot the rapids of extreme rivers and will travel all over the world to do so. Kayaking isahuge adrenaline rush orarelaxing way to see sites up close and personal. You just have to make your choice, get out there and go. A Basic Overview of Kayaks and Kayaking
The contributions of the American company on the landscape of the United States in its history and contemporary makeup have an absolutely wide varied place its difficult to comprehend at times. Without question, သော်လည်း,acontribution that certainly went beyond the community development and needed product provider that is so commonly connected with various companies, was that if plant usage in the World War II effort made by so many companies. Such was the case with the future producers of the Mastercraft Tire when the hard goods point of their production facilities was transformed intoaproduction plant for such items as: pontoons, landing boats and other military goods in 1941. Its probably little more than an interesting anecdote to today’s consumers of Mastercraft Tires, but it seems to setareasonable precedence foracompany that has seemingly continued to give to its country of origin. The makers of Mastercraft Tires, the Cooper Tire and Rubber Company, has led the industry in several safety innovations, grew intoafortune 500 company and lasted through tumultuous corporate restructuring times to remain as one of only two tire companies to last as U.S. owned. The company has continued its historical track record of existing well beyond than simplyafirm that produces goods and collects the revenues. The company has held safety in such high regard that it establishedajoint effort, along with the National Safety Council, to create and implementasafety program and campaign that was dedicated to youth education. Today Mastercraft Tires remainatire of quality and safety to consumers which place both in high regard, but nothing less should be expected fromacompany that has continued to surpass expectations Mastercraft Tires – Driving With Style
လေကြောင်း: The Sky ထဲမှာပျော်စရာရှိခြင်း, အပိုင်း 1
အမေရိကရှိလေကြောင်းသည် Wright Brothers လက်ထက်အထိရှည်လျားသောဂုဏ်ကျက်သရေအစဉ်အလာရှိသည်. ဒီလူနှစ်ယောက်ဟာပျံသန်းစက်ကိုလုပ်လိမ့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်, လူအများစုကသူတို့ကိုရူးသွပ်တယ်လို့ထင်ကြတယ်. လူသားသည်ပျံသန်းရန်မရည်ရွယ်ပါ, သောငှက်များအဘို့ဖြစ်၏. မဖြစ်နိုင်ဘူး, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်နည်းပညာပိုင်းအရဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး. သို့သော်သမိုင်းကသံသယဝင်သူများကိုမှားယွင်းစွာသက်သေပြခဲ့ပြီးလေကြောင်းသည်ခြွင်းချက်မဟုတ်ပါ. ယခုနေ့ရက်များ, မည်သူမဆိုပျံသန်းနိုင်ပါတယ်. စီးပွားဖြစ်လေယာဉ်တွင်သာမကစိတ်သဘောထားနှင့်ဆန္ဒပြည့်ဝသူမည်သူမဆိုမည်သို့ပျံသန်းရမည်ကိုသင်ယူနိုင်သည်. သင်ထင်သလောက်မခက်ခဲပါ. လွတ်လပ်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များစွာရှိပြီး wannabe pilot ကို သုံး၍ အလွန်တိုတောင်းသောအချိန်တွင် run နိုင်သည်. ဤအွန်လိုင်းကျောင်းအများစုသည်ဒေါ်လာနှစ်ထောင်မှတစ်သောင်းအထိကုန်ကျသည်. ၎င်းတို့သည်ရက်ပေါင်း (၁၁) ရက်မှရက်သတ္တပတ်များစွာအထိရှိသည်. သင်၏အချိန်ဇယားနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနပြုပါ. ၄ င်းတို့သည် ၄ ​​င်းတို့ကိုအသိအမှတ်ပြုထားသောကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။ သင်၏လိုင်စင်ကိုရယူရန်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်. ဒီအတန်းတွေဟာပျော်စရာကောင်းပြီးသိသာထင်ရှားတယ်. သငျသညျပျံသန်း၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်သင်ယူခြင်းအားဖြင့်အထဲကစတင်ပါ, လေကြောင်း၏စည်းမျဉ်းများနှင့်စည်းမျဉ်းများအပါအဝငျ. ဤလမ်းညွှန်ချက်များသည်ပျံသန်းရန်သင်ယူသောအခါနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်. နောက်တစ်ခု, သင်အသိအမှတ်ပြုသင်တန်းပို့ချသူများနှင့်လက်ချင်းယှဉ်။ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်. လေယာဉ်ကွင်းတစ်ခုလုံး၏အတွင်းနှင့်အပြင်ကိုလေ့လာနိုင်သည်. သင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာအပြည့်အဝသိနိုင်ရန်, ဒီချဉ်းကပ်မှုသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်. ဦး စွာလုံခြုံမှုရှိပါကအသစ်ရရှိထားသောကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားပါ. ဤပထမစစ်ဆေးမှုများကိုအောင်မြင်ခြင်းသည်သင့်အားလေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက်အရည်အချင်းမပြည့်မီကြောင်းသတိရပါ. ပျံသန်းရန်အပြည့်အဝအဆင့်အတန်းရရှိခြင်းသည်ရှည်သောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သော်လည်းလိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်. လေထဲရှိအပြည့်အဝလည်ပတ်နိုင်သည့်အသင်းသားမဖြစ်လာမီလေထုထဲတွင်နာရီပေါင်းများစွာပြီးစီးရမည်, လေကြောင်းအသိုင်းအဝိုင်း. ပြီးတာနဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုပြီးပြည့်စုံသည်, မင်းအလုပ်ကပြီးသွားပြီ. လေကြောင်း: The Sky ထဲမှာပျော်စရာရှိခြင်း, အပိုင်း 1
အားလပ်ရက်မှာစက်ဘီးစီးချင်တယ်ဆိုရင်မင်းဘာလုပ်လဲ? သငျသညျအတိအကျအများဆုံးကိစ္စများတွင်အဲဒီမှာသံသရာလို့မရပါဘူး, ဒါပေမယ့်သင်အဲဒီကိုရောက်တာနဲ့စက်ဝိုင်းလည်ချင်ပါတယ်. အဖြေမှာစက်ဘီးထိန်သိမ်း။ သင်၏စက်ဘီးကိုသင့်ကားနှင့်သာချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်သည်, ပြီးတော့အဲဒီမှာသူတို့ကိုမောင်း. အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာသူတို့ကိုယူတာထက်အများကြီးပိုလွယ်ပါတယ်, ပြီးတော့သင်အဲဒီကိုရောက်တာနဲ့စက်ဘီးငှားတာထက်ဈေးချိုတယ်. စက်ဘီးထိန်သိမ်းသင့်ကားရဲ့ထိပ်ပေါ်မှာထိုင်, နှင့်အံ့သြဖွယ်စက်ဘီးအရေအတွက်ကကိုင်ထားနိုင်ပါတယ် ‘ တခါတရံမှာများစွာသောအဖြစ်တ ဦး တည်းထိန်သိမ်းအပေါ်. သူတို့ကအရမ်းအသုံးဝင်တယ်, သေးယေဘုယျအားဖြင့်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့, သူတို့ကိုသင်မည်သည့်ကောင်းသောကားဂိုဒေါင်သို့မဟုတ် DIY စတိုးတွင်မဆို ၀ ယ်နိုင်သည်. မည်သည့်ပုံစံကိုသင်ရနေသည်ကိုမစိုးရိမ်ပါနှင့်: နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကသင်လိုအပ်စက်ဘီးများ၏အရေအတွက်ကိုကိုင်ထားနိုင်သကဲ့သို့, ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ကိုယ့်ဒဏ်ငွေဖြစ်လိမ့်မယ်. သင်သည်သင်၏ကားတစ်စီးမှစက်ဘီးထိန်သိမ်း fit သွားနေလျှင်, သို့သော်, သင်နှင့်သင့်ကားအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးသည်, ဒါပေမယ့်လည်းလမ်းပေါ်ရှိအခြားယာဉ်မောင်းများကိုလည်း. ဒီအတွက်ကြောင့်, ညွှန်ကြားချက်အရထိန်သိမ်းမှုကိုသင်၏ကားနှင့်သေချာစွာသေချာစေရန်လိုအပ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးစည်းမျဉ်းအားလုံးကိုလိုက်နာပါ. သင့်ရဲ့ထိန်သိမ်းမတည်မငြိမ်ပုံရသည်ဆိုပါက, သင်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်များကတပ်ဆင်ခံရဖို့ကယူသင့်ပါတယ် ‘ မည်သည့်အန္တရာယ်များကိုမယူကြဘူး. တူညီသောလက္ခဏာသက်သေအားဖြင့်, စက်ဘီးစီးရန်အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောစက်ဘီးများကိုကားပါကင်များတွင်မကြာခဏခိုးယူလေ့ရှိသည်ကိုလည်းသင်သတိပြုသင့်သည်, သူတို့သတိပြုမိစရာမလိုဘဲယူရန်လွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်သည်. လုံခြုံစိတ်ချရသောစက်ဘီးသော့ခတ်အားဖြင့်စက်ဘီးကိုထိန်သိမ်းရန်သင်သင့်သည်, ထိုကဲ့သို့သောအစိုင်အခဲသတ္တု D- သော့ခတ်အဖြစ်, နှင့်သော့ခတ်ခြင်းမရှိဘဲပိုင်ရှင်မဲ့သူတို့ကိုထားခဲ့ပါ. အထူးသဖြင့်သင်သည်အဖိုးတန်သောတောင်ကြီးစက်ဘီးများစီးနေလျှင်အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ပါသည်, တစ်ချိန်တည်းမှာငါးယောက်ဆုံးရှုံးတာဟာတကယ့်ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်. စက်ဘီးထိန်သိမ်းနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်အသုံးဝင်သည်
ဘိလိယက်ဇယား, အသစ်, အသုံးပြုခံ့, ဘယ်ရေကန်စားပွဲပေါ်မှာအကောင်းဆုံးလဲ?
ရေကူးကန်၏ဂိမ်းနှင့်ပတ်သက်သောဘိလိယက်စားပွဲသည်အလွန်အရေးကြီးသောအကြောင်းအရာဖြစ်သည်. ငါရေတွက်ရန်ရေကူးကန်စားပွဲပေါ်မှာများလွန်းကစားခဲ့ကြသည်. ငါအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကစားပွဲပေါ်မှာအဖြစ်အသုံးပြုသောသူတွေကိုအပေါ်ကစားခဲ့ကြသည်. အသစ်သို့မဟုတ်အသုံးပြုစားပွဲတော်တော်များများအတူတူကစား. ဒါဟာခြားနားချက်ကိုမှန်ကန်စေသည်. အသစ်သောအထည်နှင့်စားပွဲပေါ်တွင်ကစားခြင်းကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်ပါသည်. (ဖြစ်နိုင်ရင်ရှိမုန် 860) Simonis နှင့်အတူတစ် ဦး ကကောင်းတဲ့အဆင့်စားပွဲပေါ်မှာ 860 အထည်တော်တော်လေးအစာရှောင်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျလေးရထားလမ်းပတ်လည်ကပေးပို့ဖို့ဘောလုံးကိုအလွန်ခဲယဉ်းဖို့မလိုပါ. အဓိကပြိုင်ပွဲအများစုသည်ဤအထည်ကိုအသုံးပြုကြပြီး၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကောင်းပါသည်. စားပွဲ၏အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်သည်, ငါ Brunswick စာရင်းအပေါ်တော်တော်လေးမြင့်မားကြောင်းပြောပါလိမ့်မယ်. ကစားတာကိုကြိုက်တယ်9အသစ်သောခံစားမှုအသစ်နှင့်အတူခြေထောက် Brunswick ရွှေသရဖူ. အကြှနျုပျ၏နောက်တစ်နေ့ရွေးကယ့်ကို Brunswick နှင့်အတူတက်တစ် ဦး တက်ကြွဖြစ်ပါတယ်စိန်စားပွဲပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်. ငါပရီးမီးယားလိဂ်ကစားရှိရာသက်သေမပေါ်အတွက်စိန်ဘားစားပွဲရှိသည်. ဒီစားပွဲတွေကကြီးတယ်. ငါကိုယ်တိုင်ချိုင့်ခုနစ်ခုရှိတဲ့ဘားစားပွဲကိုပိုင်ဆိုင်တယ်. ဤသည်ကိုလည်းအချို့သောအစာရှောင်အထည်နှင့်အတူအလွန်ကောင်းတဲ့စားပွဲပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်, ရထားလမ်းကောင်းများ၊. စောင့်ကြည့်ရမည့်အခြားအရာကတော့သံလမ်း၏အခြေအနေဖြစ်သည်. အကယ်၍ ဘောလုံးသည်ရထားလမ်းကိုထိလျှင်သင်အသံကြားလျှင်၎င်းသည်မကောင်းပါ. တစ်ခါတစ်ရံမကောင်းသောရထားလမ်းသည်ဘောလုံးပေါ်တွင်မည်သည့်လှည့်ဖျားမှုကိုမဆိုလုံးဝလုံးလုံးသတ်ပစ်နိုင်သည်. ရထားလမ်းကိုပျော့ပျောင်းသောရိုက်ချက်များ၌ပင်ရိုက်သည့်အခါဘောလုံးများသည်လေထဲတွင်ပျံသန်းသည့်စားပွဲများကိုကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်. ငါရော်ဘာစူပါ Hard ရရှိသွားတဲ့နှင့်ဤဖြစ်ပျက်သည့်အခါမှာလုံးဝမပေးပါဘူးပုံပါဘဲ. အနှစ်ချုပ်ရန်, အသစ်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသောစားပွဲများသည်သင့်တွင်သံလမ်းကောင်းများရှိပါကများစွာခြားနားခြင်းမရှိပါ, တစ် ဦး အိပ်ရာနှင့်အရည်အသွေးအထည်. သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုထွက်ပြေးရန်, Ted ဘိလိယက်ဇယား, အသစ်, အသုံးပြုခံ့, ဘယ်ရေကန်စားပွဲပေါ်မှာအကောင်းဆုံးလဲ?